फायरफक्स ब्राउजर युद्ध जित्दै | Martech Zone
फायरफक्सले ब्राउजर युद्ध जित्यो
शुक्रबार, डिसेम्बर 8, 2006 सोमबार, डिसेम्बर 17, 2018 Douglas Karr
ब्राउजरहरूको लागि हालसालको बजार सेयर हेर्दा कसले युद्ध जित्दै र हराइरहेको छ त्यसबारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। फायरफक्सले गति निर्माण गर्न जारी राख्यो, सफारी माथि क्रिम्प हुँदैछ, र इन्टर्नेट एक्स्प्लोररले मैदान हराइरहेको छ। मलाई के भएको हो भनेर मेरो 'थियरी' को साथ तीन मा टिप्पणी गर्न चाहन्छु।
नेटस्केप नेभिगेटर नष्ट गरेपछि, IE वास्तवमै नेटको सुनको मानक भयो। ब्राउजर सरल, फंक्शनल, र सबै Microsoft उत्पादनहरूसँग पूर्व-लोड गरिएको थियो। साथै, एक्टिभएक्ससँग एक छोटो स्पटलाइट थियो, आईआई प्रयोग गर्न धेरै मान्छेहरू आवाश्यक हुन्छन्। किन बहु ब्राउजरहरू प्रयोग गर्ने जब तिनीहरू मध्ये एकले वेबमा सबै फरक मानकहरू समर्थन गर्दछ? म आफैंमा संस्करण through को माध्यम बाट एक आईई उपयोगकर्ता हुँ।
इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर With को साथ, वेब डिजाइन विश्वले उनीहरूको लागि डिजाइन गर्न सक्ने ब्राउजरको लागि सास फेर्दै थियो। क्यास्केडिंग स्टाइल शीटको नवीनतम टेक्नोलोजीका अनुसार प्रतिक्रिया हुने थियो। दुर्भाग्यवश, आईई disapp निराश। आईई ब्ल्गको समीक्षामा, ब्राउजर बीटा नभएसम्म यो वास्तवमै रडारमा पनि थिएन र वेब डिजाइन ईन्डस्ट्रीबाट पीडाहरूको चिच्यायो। केहि अन्तिम मिनेट विकासले केहि मुद्दाहरूको सुधार गर्यो ... तर डिजाइन विश्वलाई खुशी पार्न पर्याप्त छैन। याद राख्नुहोस् - डिजाईन संसारका धेरैले म्याकमा अपरेट गर्दैछ ... इन्टरनेट एक्स्प्लोररको अभाव छ। तर दुर्भाग्यवश तिनीहरूका लागि उनीहरूका ग्राहकहरूले इन्टरनेट एक्स्प्लोरर प्रयोग गर्छन्।
तर हाय, इन्टरनेट एक्सप्लोरर with को साथ, माइक्रोसफ्टले आमूल रूपमा प्रयोगकर्ता र ग्राहक बीचको अन्तरक्रिया परिवर्तन गर्यो। म जस्तो टेक्नोफाइलका लागि, केहि परिवर्तनहरू कडा प्रकारको थिए। तर एटिपिकल प्रयोगकर्ताको लागि ... स्क्रिनको माथिल्लो तर्फ नेभिगेट गर्न सक्षम नहुनु दुवै पज्जल र भ्रामक थियो। तिनीहरूले त्यहाँ बाहिर के हेर्न थाले। फायरफक्स।
बाट स्क्रिनसट http://marketshare.hitslink.com/
सामान्य ब्राउजर कार्यक्षमता नक्कल गर्दै जुन नेभिगेटरमा फिर्ता जान्छ, फायरफक्स ईन्टरनेट एक्सप्लोररको हल्का वैकल्पिक समाधान भयो। विद्रोही माइक्रोसफ्ट अराजकतावादीहरूको लागि, फायरफक्स एक जोश बने र बजार bण लिन थाले।
अन्य टेक्नोलोजीहरूको साथ एकीकरणका लागि शानदार प्लगइनहरू जस्तै अतिरिक्त कार्यक्षमता फायरफक्सको लागि उत्कृष्ट वरदान हो। तिनीहरू विकासकर्ताहरू र वेब डिजाइनरहरूलाई एकै किसिमले आकर्षित गर्न जारी राख्दछन् ... किनकि फायरफक्ससँग बलियो डिबगि Cas, क्यास्केडि Style शैली पाना, र तेस्रो पार्टी प्लग-इनहरू छन् जसले विकास र एकीकरणलाई एक टन सजिलो बनाउँदछ।
बजार पनि परिवर्तन हुँदैछ। एक्टिभएक्स सबै मृत छ तर एजेक्स वृद्धिमा छ, फायरफक्स जस्ता ब्राउजरहरूमा उधारो दिन्छ। यी सबै दिनहरूमा ईन्टरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग गर्न टेक्निकल रूपमा कुनै कारण छैन। यदि आईईले गर्न सक्दछ भने, फायरफक्सले यसलाई अझ राम्रो गर्न सक्दछ। विन्डोज अपडेटहरूलाई ब्राउजर चाहिन्छ, तर अब तिनीहरू लोड गर्न र यसलाई बिना स्थापना गर्न सकिन्छ।
फायरफक्सले यो उपयोगिता र लेआउटलाई त्यागेको छैन जस्तै माइक्रोसफ्टले आईई with लाई गरेको थियो, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फायरफक्समा आईई7बाट सजिलो र सजीलो रूपमा सार्न सजिलो बनाउँदछ। यो रमणीय, छिटो, र निर्बाध छ।
घर पीसी बजार मा म्याकको भर्खर धक्का संग ... यो विश्वविद्यालय, महिला र बच्चाहरु को लागी पीसी छैन। मेरो नयाँ म्याक ओएसएक्स, विन्डोज एक्सपी चलाउँछ (समानान्तरहरूको साथ) र म ग्रहको प्रत्येक ब्राउजर चलाउन सक्छु र डिजाईन गर्नका लागि। सफारी प्रीलोड गरिएकोसँग, यसमा कुनै श doubt्का छैन कि यसले म्याकहरूले साझेदारी गरिरहेकाले सेयर प्राप्त गर्दैछ। मेरो भविष्यवाणी सफारी फायरफक्समा हराउनेछ, यद्यपि।
बजार मा li'l मान्छे, ओपेरा मोबाइल बजार मा बन्द छ। तिनीहरूको मोबाइल ब्राउजरले जाभास्क्रिप्ट समर्थन गर्दछ (एजेक्स र रिच इन्टर्नेट अनुप्रयोगहरू तस्वीरमा सर्दै गरेको सम्झनुहोस्), यसलाई मोबाइल टेक्नोफाइलका लागि उत्तम ब्राउजर बनाउने। मलाई लाग्छ यसले मान्छेहरु बीच व्यवहार बनाउँदैछ जुन अब माइक्रोसफ्टबाट टाढा सर्न ठीक छ। अब छोड्ने डर कम छ।
माइक्रोसफ्ट धेरै खतरा महसुस गर्नु पर्छ - तर यो वास्तवमै आफ्नै गल्ती हो। तिनीहरूले आफ्नै ब्राउजर, परदेशी प्रयोगकर्ताहरू, पराए डिजाइनरहरू, पराजित विकासकर्ताहरू, र अब तिनीहरू अरूलाई अन्य ठाडो (मोबाइल) मा लिनको लागि कुनै आवश्यकतालाई हटाएको छ।
इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर वास्तवमै केवल आत्म-विनाशकारी हो। म निश्चित छुईन कि उनीहरूको ग्राहकको ध्यान कहाँ छ।
कि संग, यहाँ हप्ता को मेरो टिप छ। फायरफक्सलाई एक चोटि प्रयास गर्नुहोस्। विकासकर्ताहरूको लागि, CSS र जाभास्क्रिप्ट विकासको लागि केहि उल्लेखनीय प्लगइनहरूमा एक नजर लिनुहोस्। डिजाईनरहरूको लागि, तपाईंले आफ्ना पृष्ठहरू फायरफक्सका लागि 'चिह्नित' गर्न कत्तिको आवश्यक छ हेर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूका लागि तपाई पहिलो पटक फायरफक्स खोल्नुहुनेछ र बन्द र चल्नुहुनेछ। टिप यहाँ छ:
तपाईं फायरफक्स डाउनलोड र स्थापना पछि, मा जानुहोस् -On थप्न सेक्सन र तपाईंको मुटुको सामग्रीमा डाउनलोड गर्नुहोस्। जो कोहीले पनि यो कार्य गर्दछ, म तपाईंलाई दुई हप्ता ब्राउजर प्रयोग गर्न मनपराउँनेछु र मेरो साइटमा फिर्ता आउनुहोस् र मलाई थाहा दिनुहोस् तपाईंले के सोच्नुभयो।
म एक दशक भन्दा बढी को लागी माईक्रोसफ्ट मान्छे भएको छु, त्यसैले म एक छैन बाशर। यद्यपि, आईई टीमले आफैंमा पाएको रणनीतिक गडबडीको बारेमा छलफल गर्न म बाध्य भएको महसुस गरें।
टैग: ब्राउजर युद्धब्राउजरहरूफायरफक्सieइन्टरनेट अन्वेषक।Microsoftनेटस्केप नेभिगेटर
ग्रहमा सब भन्दा छिटो बढ्ने ब्लग?
म एक SOB (र यसको गर्व) हुँ!
डिसेम्बर १, २०१ 8 2006:२:11 अपराह्न
मँ सहमत छु कि आई आई अब प्रयोग गर्ने कुनै कारण छैन, तर दुर्भाग्यवश विश्व अझै पनि इन्टरनेट भर्नाहरु भरिएको छ जसले अझ राम्रो जान्दैन। आशा छ मुखको कुरा अन्ततः परिवर्तन हुनेछ।
डिसे 9, 2006 मा 3: 54 AM
म धेरै वर्षको लागि फायरफक्सको खुसी प्रयोगकर्ता भएको छु। असंख्य विस्तारहरू र इन्टरनेट एक्स्प्लोररमा बृद्धि भएको सुरक्षाको कारणले गर्दा म योसँग प्रेममा छु।
जब यस नयाँ वर्षको शुरुमा मैले मेरो नयाँ म्याकबुक प्रो पाएँ, मैले सफारीलाई केहि हप्ताको लागि प्रयास गरें, तर फेरि फायरफक्समा गएँ। अनुकूलन को लागी विकल्पहरु असीमित छन्। बितेको वर्षमा, मैले सफलतापूर्वक मेरो पूरै परिवार (र सबै भन्दा धेरै साथीहरू) लाई फायरफक्समा रूपान्तरण गरें।
डिसे 9, 2006 मा 11: 27 AM
पावल मलाई अप्ठ्यारो बनाउन चाहँदैनथे - तर तपाईले मेरो फोबियसलाई फाइलहरूमा सम्पादन गरेको याद गर्नुहुनेछ! पावलबाट राम्रो क्याच जो मलाई ईमेल गर्न को लागी राम्रो थियो! मलाई चिन्ने मान्छे म जान्दछु म अंग्रेजीमा होस्ट गर्ने विशेषज्ञ हुँ। यो वास्तवमै एक साथी हो जसले तपाईंलाई आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्नबाट बचाउँछ!
पल मा एक महान ब्लग मा छ:
डिसे 17, 2006 मा 1: 17 AM
म पूर्ण रूपमा सहमत छु कि फायरफक्सले आईई7वा माथी हराउँदैछ ...
कुटपिटको कारण फायरफक्स प्लगइनहरू र फायरफक्स एड-अनहरू हुन्।
मलाई लाग्छ जुलाई २०० 2007 मा, IE 35 XNUMX% मा खडा हुनेछ
डिसे 17, 2006 मा 2: 21 AM
Assalamu, फजल। म तपाईँसँग सहमत छु! फायरफक्स Al अल्फा पहिले नै सकिसकेको छ, मोजिल्लाले ट्रेल ब्ल्याजेको छ जुन माइक्रोसफ्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
फेब्रुअरी १,, २०११ 3:१:2007 अपराह्न
मैले मेरो डेस्कटप कम्प्युटरमा आईई installed स्थापना गरें र यसको राम्रोसँग काम गरे पछि मैले यसलाई केही सidd्केत गरेँ तर जब मैले यसलाई मेरो ल्यापटपमा स्थापना गरेँ, यसले सबै कुरा रोकिदियो। यदि मैले यो फेला पारेको थिएन कि प्रोग्राम (कुनै पनि add-ons बिना) पनि मेरो प्रोग्रामहरूमा सहायक उपकरण अन्तर्गत सामेल गरिएको थियो म कुनै पनि हालतमा जान सक्दिन।
म चिन्तित छु, म अनलाइन बैंकिंग गर्छु र म Foxfire प्रयोग गर्न सक्दिन भन्नेमा निश्चित छु। म प्रयास गर्न चाहन्छु तर मलाई अधिक जानकारी चाहिन्छ।
आधुनिक अनलाइन बैंकिंग क्रस ब्राउजर अनुरूप हो। चिन्ता एसएसएल (सुरक्षित सॉकेट लेयर) लाई समर्थन गर्नेको लागि हो, जुन तपाइँको ब्राउजर र बैंकको अनलाइन सर्भरहरू बीच डाटा सञ्चार गर्ने एक ईन्क्रिप्टेड माध्यम हो। फायरफक्सले SSL लाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछ जस्तै आईईले कुनै सीमितता बिना गर्दछ। तपाईले एसएसएल प्रयोग गरिरहनु भएको सब भन्दा स्पष्ट तरीका यो हो कि तपाई सट्टामा https: // ठेगानामा हुनुहुन्छ http://। जे होस्, दुबै आईई र फायरफक्स (र ओपेरा र सफारी) सँग भिजुअल सators्केतकहरू र प्रमाणिकरण प्रक्रियाहरू छन् जुन SSL प्रमाणपत्र र ईन्क्रिप्शन वैध छन् र ठीकसँग काम गरिरहेको छ।
अर्को शब्दहरूमा - तपाईसँग कुनै मुद्दा हुनुहुन्न। पक्कै पनि यसले तपाईंको बैंकको "समर्थन" पृष्ठ जाँच गर्न चोट पुर्‍याउँदैन कि यदि तिनीहरूले फायरफक्सलाई समर्थन गर्दछ भने। तपाईंले वास्तवमै यो राम्रो ब्राउजर पाउनुहुनेछ - धेरै धेरै गुडीको साथ धेरै छिटो।
भ्रमण गर्नुभएकोमा र टिप्पणीको लागि धन्यवाद!
नोभेम्बर २०, २००। 3::2007 अपराह्न
फायरफक्सले -०० मिलियन डाउनलोड मार्क्स पार गर्‍यो र, आशा छ, अगाडि बढ्नेछ। विकल्पहरू जहिले पनि प्रगतिको मार्ग हुन्।
तर विजयी ब्राउजर युद्ध ... कि को लागी अझै प्रारम्भिक।
मैले आई.ई. का प्रयोग गरेको वर्षौं भइसक्यो, यसलाई प्रयोग गर्न जारी राख्नुहोस् र स्पष्टसँग फायरफक्सको प्रयोगकर्ता-स्तर फाइदाहरूबाट प्रभावित भएन। मलाई शंका छ कि विशाल बहुमत प्रयोगकर्ताहरूले कम ध्यान दिन सक्दछन्। म तपाईंसँग सहमत छु, तथापि, आईई7मा परिवर्तन थोरै भ्रामक थियो।
ड्यारेन सेन्ट पियरे
नोभेम्बर २०, २००। 21::2007 अपराह्न
मँ I7 मा तपाइँका विचारहरू र एक वेब डिजाइनर भएकोमा सहमत छु, आई आई released रिलिज हुँदा मलाई केहि चीजहरू दिएन। म हाल नयाँ वेबसाइट बनाउने प्रक्रियामा छु र मैले डिब्सका साथ केही मुद्दाहरू भेट्टाएको छु तर कुनै ठूलो कुरा होइन (त्यसैले टाढा)। मैले आईई min न्यून मात्र प्रयोग गरेको छु तर म सीएसएस समर्थन आदिको सन्दर्भमा .7.० बाट ठूलो उछालको आशा गर्दै थिएँ।
म धेरै बर्ष फायरफक्स प्रयोगकर्ता भएको छु र केही नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई बाटोमा भर्ती गरेको छु। मलाई लाग्छ कि मलाई सबैभन्दा आकर्षित गर्ने चीज, र अन्य धेरै FF प्रयोगकर्ताहरू, यो तथ्य यो हो कि यो अत्यन्त वेब डिजाइनर / विकासकर्ता अनुकूल छ र अनुकूलनले ड्राइभ गर्दछ। मलाई लाग्छ आईई पल्मेट गर्न जारी रहन्छ र मलाई लाग्छ माइक्रोसफ्टलाई यस बिन्दुमा एउटा चमत्कारको आवश्यक पर्दछ। फायरफक्सले प्राप्त गरेको गति र सफारी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ, आईईलाई आउट गर्दैछ र तिनीहरू वेब मापदण्ड अनुरूप ब्राउजर उत्पादन गर्नमा छोटो रहन्छन् भन्ने तथ्यले उनीहरूलाई कम्तिमा सहयोग गरिरहेको छैन।
हाम्रो वेब डिजाइनरहरूले मात्र उनीहरूलाई यति धेरै अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ 😛
नोभेम्बर,, २०१ at 22::2007 बिहान
यी टिप्पणीहरू बरु भ्रमपूर्ण छन्। सबैभन्दा भर्खरका तथ्या According्कका अनुसार मैले आईईको सेयर plum..85.88% बाट pl 4..2005% बाट Q. Q २००% मा .78.5 3..2007% बाट विश्वव्यापी सेयरमा "गिराएको" देखेको छ। यो करिब दुई बर्षमा .7.3..XNUMX% को गिरावट हो।
यसैबीच, फायरफक्सले उही समय अवधिमा%% बाट १.9..14.6% जूम गर्यो। लगभग दुई बर्षमा 5.6..XNUMX% ले वृद्धि भएको छ।
सफारी 3.1.१% बाट 4.77..XNUMX% मा गएको छ - एक बृद्धि जुन कुरा गर्न गाह्रो छ।
हो फायरफक्सले आईई मा हासिल गरिरहेको छ, तर आईई अझै पनी स्पष्ट रूपमा प्रयोगकर्ताहरु लाई xx भन्दा बढी छ।
यी तथ्या .्क विकिपेडियाबाट छन् "उपयोग_शेयर_अफ_वेब_ब्राउजरहरू" र पक्कै पनि एक वा अर्को पक्षपाती हुन सक्छ।
स्पष्ट रूपमा विश्वको प्राय: वेब डिजाइनरहरूले के सोच्छन् भन्ने कुरालाई वास्ता गर्दैन। मलाई लाग्छ कि हामीले आफ्नै व्यक्तिगत प्राथमिकताहरूको बारेमा चिन्ता गर्नु भन्दा हामीले जनताको लागि डिजाइन गर्नुपर्दछ।
धन्यवाद रिक! तपाईंको स्रोतहरू तथ्या ?्कहरू कहाँ छन् भनेर हामी सोध्न सक्छौं?
म तपाईंसँग सहमत छु, तर त्यहाँ वेब साइट डिजाइनरहरूले के सोच्छन् भनेर सावधानीपूर्वक कथा छन् ... र त्यो त्यो वेब डिजाइन एक महँगो उद्यमको रूपमा जारी रहनेछ जब तपाईं standards 85.88..XNUMX% मार्केट शेयरलाई खुशी पार्न मापदण्ड बाहिर डिजाइन गर्नुपर्नेछ!
म अहिले एक साइटमा काम गरिरहेको छु जुन एफएफ र सफारीमा उत्तम देखिन्छ, तर आईईले यसलाई पूर्ण रूपमा गार्बेल गर्दछ ... समस्या? मसँग पृष्ठको सामग्री भित्र जाभास्क्रिप्ट छ र त्यो के चलिरहेको ग्राफिक्स हो जुन १००% CSS ड्राइभ गरिएको छ! अब मैले सबै स्क्रिप्टलाई एउटा समावेशमा राख्नुपर्दछ - जसले पृष्ठलाई राम्रोसँग लोड गर्न दिदैन, त्यसैले मैले 'प्रीलोड' वस्तुहरूमा थप कोड थप्नु पर्छ।
नोभेम्बर २०, २००। 22::2007 अपराह्न
यो सँधै जनताको लागि डिजाईन गर्न प्राथमिकता हुन्छ तर तथ्य यो छ कि माइक्रोसफ्ट सबैको साथ अनुरूप छैन, हाम्रो कामलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ। मँ कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा अलग शैली पाना लेख्न को लागी आई.ए. को लागी एक्लै र यो समय खपत छ। यो औसत प्रयोगकर्तालाई केहि मतलब छैन। यो केवल निराशाजनक छ जब प्याकलाई नेतृत्व गर्ने ब्राउजर एक हो जुन कम से कम वेब मापदण्डहरूको अनुपालन गर्दछ।
मैले आफूलाई डग्लस नै काम गरिरहेको पाएँ। मैले मेरो जाभास्क्रिप्ट भित्र राख्नु पर्छ वा JS फाईलहरू अलग गर्नु पर्छ जुन मेरो पृष्ठहरूमा लिंक छ। यसलाई मेरो मार्कअपमा सिधा ईन्जेसन गर्न चीजहरू हाईवायर गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
मसँग डिजाइनर दृष्टिकोणबाट तपाईंको चिन्ताको कुनै तर्क छैन, यद्यपि म किन पक्का छैन किन तपाईं चिन्तित हुनुहुनेछ कि तपाईं आफ्नो सेवाहरूको लागि व्यक्तिलाई बढी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। के यो मान्छे यसको लागि भुक्तान गर्न तयार छैनन्? स्पष्टतया यी प्राविधिक मुद्दाहरू छन् जुन पार गर्नुपर्दछ।
म भर्खरको सुझावको साथ मुद्दा लिन्छु कि त्यहाँ आईईबाट टाढा एक विशाल आन्दोलन छ। तथ्या .्क (जहाँसम्म म भन्न सक्छु) ले त्यस दावीलाई समर्थन गर्दैन, सबै डिजाइनरहरू र SEO हरूको दाबी गर्दछ जसले अन्यथा दावी गर्दछ र जसले अन्तहीन रूपमा FF लाई बढावा दिन्छ। चाहे उनीहरूले यसलाई प्रमोट गर्नु पर्ने हो अर्को प्रश्न हो, र तपाईं त्यस बारे पूर्ण रूपमा सही हुन सक्नुहुन्छ।
मैले मेरो टिप्पणीमा भनें, मेरो स्रोत विकिपेडिया थियो - सबैभन्दा प्रभावशाली ध्वनि स्रोत होइन, तर संख्या राम्ररी देखिन्छ ...
नोभेम्बर २०, २००। 23::2007 अपराह्न
तपाईं दुबै मुद्दामा सहि हुनुहुन्छ, रिक। म तर्क गर्छु कि आईईको बजारमा प्रमुख हिस्सा छ किनकि यो अपरेटि System प्रणालीको एक हिस्सा हो, यद्यपि। यदि यो डाउनलोड र निष्पक्ष छनौटको लागि डाउनलोड गरिएको हो भने, म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि एफएफले उनीहरूको बटहरू लात हान्नेछ।
डिसे 21, 2007 मा 6: 51 AM
म एक प्रोग्रामर र वेब विकासकर्ता भएको थियो। २०० In मा म एउटा दुर्घटनामा थिए र मेरो टाउकोमा हिर्काए। लेखन कोड अब मेरो लागि धेरै नै छ, त्यसैले अब म केवल एक सामान्य जो..लोल हुँ
जे भए पनि, म १ 19962like देखि लिनक्स प्रयोग गर्दैछु (क्याल्डेरा-सम्झनुहोस् जब तपाईं यसलाई आफु २ दिनको लागि डाउनलोड गर्न दिनुहुन्थ्यो ..)। फायरफक्स भन्दा पहिले वेब ब्राउजरहरू यसका लागि कहिल्यै राम्रो थिएनन्। जब फायरफक्स बाहिर आयो, यो लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चीज थियो (थन्डरबर्ड पनि)। माइक्रोक्र्यापले जहिले पनि लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्‍यो, उनीहरूले आफैंलाई खुट्टामा हिर्काए। मलाई याद छ फायरफक्स / थन्डरबर्ड लिनक्सको लागि सजिलै माथि इन्टरनेट सूट बन्नुभयो। यो भारी छैन, र तपाईं जुनसुकै एक्स्टेन्सनहरू राख्नुहुन्छ जुन तपाईं मन पराउनुहुन्छ (एडब्लॉक!)। यसैले, यो तपाईको जस्तो हल्का वा भारी छ। कुनै पनि अनावश्यक भागहरू छैन। ट्याबहरू राम्रो र सानो छन्।
म हालै विन्डोज xp प्रयोग गर्दैछु, किनकि यहाँ अन्य 'दुर्भाग्यवस' यो यो पीसी किन्नको शर्त बनायो, त्यसैले 'तिनीहरूले' यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् (idiots)। यसैले मैले तत्कालै फायरफक्स / थन्डरबर्ड डाउनलोड गरें। जब मैले विन्डोज फेरि प्रयोग गर्‍यो, मैले आउटलुक अभिव्यक्तिलाई घृणा गर्‍यो, र अझै फायरफक्सलाई मेरो एक्स्टेन्सनहरूको साथ फिर्ता चाहान्छु (मैले सबै कन्फिगरेसन पनि सुरक्षित गरें। लिनक्सबाट मेरा बुकमार्कहरू पनि राखें, र उनीहरूलाई Winxp मा आयात गरे!)।
हालसालै, मेरो पीसी रातारात पुनः सुरु भयो, र मैले यो एलियन देखिरहेको फ्याट टुलबार भारी ट्याबहरूको साथ टाढा जाँदिन। फ्रिगजिन उपकरण बारहरूले १/1 ले रित्तो स्क्रिन लिन्छ! मैले यसलाई घृणा गरें! यहाँ सबैजनाले यसलाई घृणा गरे। STOP बटन कहाँ छ? कसैले पनि ब्राउजर यति धेरै ठाउँ लिन चाहन्छ! विशाल ट्याबहरू, त्यहाँ त्यहाँ मात्र १ पृष्ठ छ !!
वेब पृष्ठ को बारेमा के? तपाईले यसलाई देख्न पनि सक्नुहुन्न किनकि तपाईले हेर्नुहुने सबै ब्राउजर हो! यो यति विचलित छ, कि म यो खडा गर्न सकेन। माइक्रोसफ्ट सुविधा को कुनै गुनासो गर्न को लागी सहज छैन। कबाड कबाड को एक pile। मेरो स्क्रिन रिजोलुसन ११२२ × 1152 at मा सेट गरिएको छ र म यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन कि यो 864०० × 800००० मा कस्तो देखिन्छ! के म पृष्ठ पनि हेर्न सक्षम हुनेछु?
त्यसोभए आई2को लागि २ औंलाहरू तल! सबैले यसलाई घृणा गर्छन्, र यो आई आईको मृत्यु हो। हास्यास्पद, तिनीहरूसँग ठीक ब्राउजर थियो, तर फायरफक्स प्रतिलिपि गरेर, उनीहरू अब जंक भयो। मेरो मतलब .. टुलबारमा के सबै बकवास के हो, र बाँकी बटन कहाँ छ ??
त्यसोभए, माइक्रोसफ्ट धन्यवाद, तपाईंले अन्तमा आफैंमा काम गर्नुभयो! म अब अरू धेरैलाई बुझाउने धेरै समय खर्च गर्दछु जसले फोन गर्छन् र सोध्छन् किन तिनीहरूको ब्राउजर अचानक डरलाग्दो र जटिल छ, र उनीहरूलाई आईई unin अनइन्स्टल गर्न मद्दत गर्दछ! कसैले पनि यसलाई चाहँदैन!
मई 28, 2008 मा 12: 30 PM
मलाई लाग्छ तपाईको सहि श्रीमान ब्लग मानिस, मैले आफ्नो कम्प्युटरमा एक बर्ष भन्दा बढि फायरफक्स प्रयोग गरिरहेको छु र त्यसबेलादेखि पछाडि फर्केर हेरिन। जो कोही जसले कम्प्युटर सफ्टवेयरको बारेमा केही जान्दछ तपाईंलाई बताउन सक्छ कि फायरफक्स उच्च ब्राउजरले तल हो। मैले कहिल्यै थन्डरबर्ड सफ्टवेयरको प्रयास गरेको छैन किनकि Office Enterprise मा आउटलुक २०० very एकदम राम्रो छ र मेरो लागि ठूलो काम गर्दछ। किन यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् यदि भत्काइएको छैन भने। IE 2007-6 बिच्छेदन भएको छ, जे भए पनि मँ मित्र, परिवार, अनलाईन साथी, वा केवल एक व्यक्ति जो मँ सँधै मद्दत चाहन्छु वा म इन्स्टल गर्छु वा फायरफक्स प्राप्त गर्न भन्छु। यो मेरो पुस्तकमा कुनै दिमाग छ।
म केवल जान्न चाहन्छु कि किन माइक्रोसफ्टले सोचे कि उनीहरूले एक उच्च ब्राउजर जारी गरिरहेछन्, के तिनीहरू आफू वरपरको संसारमा पूर्ण रूपमा अयोग्य छन्? यो किनभने उनीहरूले सोच्छन् कि उनीहरूको सफ्टवेयर यति अद्भुत छ कि मानिसहरूले यसलाई जे भए पनि यसलाई प्रयोग गर्ने छन्? वा यो किनभने माइक्रोसफ्टले दिनमा अरबौं रुपैयाँ कमाइरहेको थियो र उनीहरूले भने "उपभोक्तालाई बिर्सनुहोस् उनीहरूलाई के लाग्छ हामीले ख्याल गर्दैनौं" त्यसैले उनीहरूले केवल बेकार र जवाफदेही ब्राउजरलाई बजारमा बाध्य पारिदिए। इडियट्स! यो त्यस्तो होइन जस्तो मसँग जाँकी कम्प्यूटर छ, आईई कुनै पनि प्रणालीमा क्र्याप जस्तो चल्छ। यो सफ्टवेयर कोड वा केहीमा हुनु पर्छ।
केवल रमाईलोको लागि मैले यसलाई आज लोड गरें कि केही चमत्कार (नोप) द्वारा अझै सुधारिएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। त्यसो भए मैले आफैलाई भने किन "किन, किन यस्तै प्रकारको चल्छ" तसर्थ मैले खोजी गरे (किन इन्टरनेट एक्सप्लोरर यति बिस्तारै लोड हुन्छ) र निस्सन्देह मैले Google गृह पृष्ठ खोजी फायरफक्समा प्रयोग गरें। अर्को साइटबाट लि following्क पछ्याए पछि यसको अन्त्य भयो। मैले साइड ट्र्याक गरें त्यसैले मसँग अझै मेरो उत्तर छैन। Go Firefox Go! बिल गेट्स लाई नट्समा हाम फाँट्नु सबैका लागि एक पटक एक व्यक्ति निरन्तर। म एउटा ड्र to FF मा फिर्ता नोट गर्नेछु यद्यपि, यो मेमोरी उपभोगको बारेमा खराब छ। सजीलो फिक्स्ड विचार, द्रुत, ढिलो पुनः सुरुआतले यसलाई ठीक गर्दछ।